Ndandifuna Ukuyeka Ukukhonza UThixo | Incwadi Yonyaka Ka-2015
IBALI LOBOMI UMartín wafumana inyaniso ngoxa wayefundela ukuba ngumfundisi. Ukususela ngoko, uye wanceda abantu abaninzi baba ngabanquli bokwenyaniso.
NDAKHULISWA yintsapho engamaKatolika eyayiluthanda ngokwenene unqulo neyayifuna ukuba ndibe ngumfundisi. Ngoko xa ndandineminyaka eyi-12, ndenza izifundo ezintathu ndifundiswa ngabefundisi abahlukahlukeneyo. Ngo-1990, xa ndandineminyaka eyi-14, ndabizwa kwesinye sezona zikolo zabefundisi ziphum’ izandla.
Ndakhawuleza ndenza inkqubela kangangokuba ndaxelelwa ukuba, ukuba ndiyazimisela kwizifundo zam, ndisenokuba ngubhishophu. Noko ke, ndatyhafiswa kukuba endaweni yokufundiswa iBhayibhile, sasifundiswa iingcamango zabantu. Enye into, abefundisi babeziphethe kakubi ngeyona ndlela. Xa baqalisa imikhuba yokundincwasa, ndafuna ukuyeka ukukhonza uThixo.
Kanye ngelo xesha, kwafika esinye isibini esingabathunywa bevangeli sathetha nomntu owayesebenza kwicandelo lezimali kwesi sikolo, saza samnika incwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo. Ndayiboleka ndaza ndayifunda yonke. Ndathi, ‘Nantsi eyona nto ndiyifunayo.’ Ndemka kweso sikolo, ndaqalisa ukufunda namaNgqina, ndaza ndaya nakwiintlanganiso. Kwiinyanga ezisibhozo emva koko, ngoJulayi 1991, ndabhaptizwa. Ndaba nguvulindlela othe ngxi ndaza ndatshata nomnye udade owayenguvulindlela, uMaría. Siye saba ngoovulindlela abakhethekileyo ukususela ngo-2006. Kunokuba ndiyeke ukukhonza uThixo, ngoku ndiyakuthanda ukunceda abantu abalambele inyaniso babe ngabanquli bakhe bokwenyaniso.